दामन घटना छानबिन गर्न समिति गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
माघ ८, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — मकवानपुरको दामनस्थित एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा निसासिएर मंगलबार मृत्यु भएका ८ भारतीय पर्यटकको घटनाबारे पर्यटन विभागले छानबिन गर्ने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार पर्यटकको सुरक्षामा रिसोर्टका तर्फबाट कमीकजोरी भएको हो या होइन ? लगायतका विषयमा छानबिन हुनेछ । ‘दामनको घटना निकै गम्भीर छ,’ पर्यटनमन्त्री भट्टराइले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘एउटै कोठामा ८ जना किन सुताइए ? रिसोर्ट व्यवस्थापन वा अतिथि कसको कमीकमजोरी भएको हो ? कारबाही गर्नुपर्ने विषय भएमा कारबाही हुनेछ ।’
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार छानबिन समितिले यस घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी १५ दिन्भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।
छानबिन समितिको नेतृत्व विभागको होटल शाखाका निर्देशक सुरेन्द्र थापालाई तोकिएको छ । यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, होटल संघ नेपाल र पर्यटक प्रहरी प्रमुख (निरीक्षक) र होटल विभागकै शाखा अधिकृत तिलक रिजाल सदस्य छन् ।
दामनबाट उद्धार गरिएका ८ भारतीयको मृत्यु, मृतकमध्ये ४ नाबालक
हिटर बालेर सुतेकाहरू उठेनन्, किन एसी नराखेको ?
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १९:४५
रसुवा — नेकपा रसुवाका ५० जनाले पार्टी परित्या गरेका छन् । खेलकुद विकास समितिमा एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपा कार्यकर्ताले बुधबार पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।
नेकपामा आबद्ध जिल्ला खेलकुद विकास समिति रसुवाका पूर्वअध्यक्ष तेम्पासिंगी तामाङ सहित ५० जनाले पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।
खेलकुद विकास समितिमा सहमति बेगर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै तामाङ सहित ५० जनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
तामाङलाई नै अध्यक्ष पदमा पुनर्बाहली गर्ने सहमति भएकोमा अन्तिममा आएर धोका दिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तामाङले २०७२ सालदेखि हालसम्म जिल्ला खेलकुद विकास समिति रसुवाको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरेका थिए ।
दावा तामाङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति रसुवाको अध्यक्ष पदमा चयन भएका छन् । पूर्वअध्यक्ष तामाङ पार्टी कार्यसमिति सदस्य, २०६५ सालमा युवा संघ रसुवजाको अध्यक्ष, २०६७ सालमा युवा संघ नेपालको केन्द्रिय सदस्य तथा युवा संघ नेपालको पश्चिम वागमती सचिव भएका थिए । मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १९:३६
बजार अनुगमन गर्न काठमाडौं प्रशासनले गठन गर्‍यो तीनवटा मार्सल टोली
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाको २५ लाख रुपैयाँको बीमा, ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिरमा
पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालन गर्न दिन सकिँदैन : यातायात मन्त्री
'कोरोनाको जोखिम सकिएर लकडाउन खोलिएको होइन, सचेत रहौं'
आँट गरेर भाग्दा बेचिनबाट जोगिइन्
नेपाल-चीनबीच सीमा समस्या छैन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली